मिलन चाम्सको ६ हप्तामा ३ फिल्म प्रचार न्युन, एकले अर्कोलाई असर गर्ने संभावनाFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
मिलन चाम्सको ६ हप्तामा ३ फिल्म
प्रचार न्युन, एकले अर्कोलाई असर गर्ने संभावना
फिल्मी फण्डा । पटक–पटक गरेर चार पटक रिलिज डेट सारिएको फिल्म ह्यापि डेज अब चैत्र २ गते रिलिज गरिने नयाँ जानकारी निर्माण टिमले दिएको छ । पछिललो समय चैत्र १६ गते रिलिज हुने तयारी रहेको थियो । तर चैत्र ९ गते शत्रुगते रिलिज हुने भएपछि दोश्रो हप्तामा असर पर्ने कारणले ह्यापि डेज चैत्र २ गते अगाडी गएको स्रोतको दावी छ । यता चैत्र १६ गते हिन्दी फिल्म बाघी पनि रिलिज छ । त्यसकै कारण पनि ह्यापि डेज डराएको अनुमान छ । चैत्र ९ गते रिलिज हुने शत्रुगते कलाकारहरुको महासग्राम र छक्का पञ्जाको टिम सहित मह जोडीको पनि फिल्म भएको कारण दोश्रो हप्तामा जाने निश्चित छ त्यस कारण ह्यापि डेजलाई असर पर्न सक्छ । बाघीकै कारणले पनि ह्यापि डेज सरेको हो । सलमान खान, आमिर खान र शाहरुख खानका बाहेक बलिउड फिल्मले खासै नेपाली फिल्मलाई असर गर्दैन । बाघीसँग ह्यापि डेज डराउनु पर्ने कारण थिएन ।
मिलन चाम्सले निर्देशन गरेको फिल्म ह्यापि डेज सहित अन्य फिल्महरु पनि फाल्गुन र चैत्र मै रिलिज हुने भएका छन् । फाल्गुन १८ गते ब्लाईन्ड रक्स, चैत्र २ गते ह्यापि डेज र चैत्र ३० गते लिलिबिली गरेर ६ हप्ता भित्र मिलन चाम्सको लगातार ३ फिल्म रिलिजले गर्दा एकले अर्कोलाई असर गर्ने हो की भन्ने चूनौती पनि छ । फिल्म ब्लाईन्ड रक्स र ह्यापि डेजको मिडिया हाईप पनि सोचे अनुसारको छैन । प्रचार न्युन भएकै कारणले मिलन चाम्सको शुरुवाती रिलिज फिल्मलाई असर पर्दै गयो भने एकले अर्कोलाई असर पार्ने निश्चित देखिन्छ । जसले गर्दा नयाँ बर्षको छेकोमा रिलिज गर्न लागिएको फिल्म लिलिबिलीलाई समेत असर पुग्ने संभावना देखिन्छ ।
ह्यापि डेज भन्दा अगाडी फिल्म पञ्चायत, डेस्टिनेशन काठमाडौं रिलिजको लागि फाईनल भईसकेका छन् । कतै ह्यापि डेज नेपाली फिल्मकै चेपुवामा पर्ने त होईन ? त्यो रिलिज ताका नै थाहा होला ।
फिल्मको रिलिज डेट परिवर्तनसँगै निर्मार्ण टिमले गीतको कभर भिडियो प्रतियोगिता पनि घोषणा गरेको छ । फिल्मको हिट गीत ‘चेप्टे चेप्टे पेरुंगो’ मा कभर भिडियो बनाउने मध्येका उत्कृष्टलाई १ लाख उपहार दिने गरि कभर प्रतियोगीता शुरु गरेको हो । युट्युबमा सर्वाधिक भ्युज पाउने भिडियोलाई निर्माण पक्षले विजय उत्कृष्ट गरिनेछ । दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की, संजय गुप्ता, विक्की जोशी, शिशिर राणा, रुपा पुन, रिकेश चाम्स र जेन बकलको अभिनय रहेको फिल्मलाई बिपी खनाल, भवानी शर्मा, हिराल जोशी, मिलन चाम्स र डा. अशोक खनालले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । जे होस् चैत्र २ बाट अब नसरोस् फिल्म ह्यापि डेज ।